Meicet - Mpanadihady hoditra, Mpanadihady vatana, Fitaovana hatsaran-tarehy
Tongasoa eto amin'ny Shanghai May Skin
Aiza isika izao?
Mpamatsy mpandinika hoditra, mpandinika ny vatana, ary fitaovana momba ny hatsaran-tarehy.
Inona no azontsika atolotra?
Fikarohana sy Fampandrosoana, Famokarana, Varotra ary Fampiofanana.
Firy kaontinanta no nanondranana ny vokatray?
55 firenena.Amin'ny 2022 dia hisy bebe kokoa.
Nahoana no misafidy ny MEICET?
Ekipa R&D manana traikefa
Injeniera maherin'ny 20 no tompon'andraikitra amin'ny UI, Hardware, Software, Algorithm ary Testing, ka ny MEICET App nampiasainao dia miorina tsara, manan-tsaina ary mora ampiasaina.
Fandefasana haingana noho ny fahafaha-manao ampy.kalitao azo itokisana noho ny 100% QC fisafoana alohan'ny fanaterana.
Serivisy aorian'ny varotra ara-potoana
Afaka omena fiofanana maimaim-poana hampianatra anao ny fomba fampandehanana ny milina.Ny olan'ny vokatra rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
Traikefa manankarena 12+ taona
Traikefa manankarena voaangona amin'ny fampiharana, ka ny milinantsika dia azo alaina mifanaraka amin'ny fahazarana ampiasaina.
Ny ekipan'ny injeniera MEICET
MEICET dia manana ny patanty algorithm azy manokana, Skin Cloud Algorithm.Al Fianaran-tena, fanatsarana exponential, fitiliana manam-pahaizana 9 segondra.
Injeniera UI avo lenta
Asongadinay tsara ny famolavolana ankapobeny ny fifandraisan'ny olombelona-solosaina, ny lojikan'ny fampandehanana, ary ny interface tsara, mba hiara-hiasa amin'ny vahaolana vaovao.
Mifanaraka amin'ny fironana mavitrika amin'ny tsena ny ekipanay ary mamaly ny fivoaran'ny rindrambaiko.
Miara-miasa amin'ny Akademia Shinoa momba ny Siansa izahay, Famolavolana famolavolana ny loharanom-pahazavana manam-pahaizana Ny loharanon-jiro amin'ny tarehy dia mandrakotra 95%;OEM, ODM azo alaina.